sawehlor: December 2011
Posted by saw ehlor at 10:320comments
Posted by saw ehlor at 10:210comments
ကြက်တောင်ပံကြော်ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ့်
ဒါကတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတမီးတဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးပါ။
မကြာသေးမီက ကျမ သူငယ်ချင်းမ တယောက် သူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်တည်သလိုလိုိ အခဲတခု ဖြစ်ပြီး ကြီးကြီးလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်…
အဲဒီအခဲဟာ ခွဲစိတ်ပြိးကြည့်လိုက်တော့ မဲပုပ်နေတဲ့သွေးခဲကြီးပါတဲ့...
သူမကတော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာပေါ့..
ဒါပေမယ့်.. သူထင်တာနဲ့တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါ့တယ်..ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့…
Posted by saw ehlor at 20:560comments
Source : နည်းပညာမှတ်တမ်း
Posted by saw ehlor at 19:500comments
Posted by saw ehlor at 08:420comments
Labels: Download ချနည်း
ပို့စ်ခေါက်နည်းကို ကျွန်တော်ပြောပြပါ့မယ် .
မပြောချင် template ကိုတော့ back up လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .. ဒါမှ ကိုလုပ်တာ မှားယွင်းသွားရင် အရင် Blog ပုံစံအတိုင်း ပြန်ရမှာပါ .
(၁) blogspot ကို log in ၀င်လိုက်ပါ ..
(၂) Layout >> Edit HTML ကိုသွားပါ ..
(၃) </head> ကို ရှာပါ </head> မဆုံးခင်လေးမှာ အောက်မှာ မှင်အနီနဲ့ ပြထားတဲ့ script ကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။
(၄) ပြီးတာနဲ့ save လုပ်ပါမယ် ..
(၅) layout >> Html မှာ Expand widget Templates ဆိုတာလေးကို check လုပ်ထားပေးပါ။
(၆) Ctrl+F ကို နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ search box မှာ id='post' လို့ ထည့်ရှာလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကို လိုက်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ . မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အောက်ကအတိုင်း လိုက်ပြင်ပေးပါ . တူညီအောင် သေချာလိုက်စစ်ပြီး ပြင်ပေးလိုက်ပါ . အဲ့လို မလုပ်ချင်ရင်လဲ နံပါတ် (၇) နည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ...
Posted by saw ehlor at 07:440comments
Posted by saw ehlor at 19:360comments
ကွန်ပျူ တာ speed မြှင့်ခြင်းအကြောင်းလေးပါ။
Posted by saw ehlor at 10:580comments
Labels: ကွန်ပျူ တာ မြန်အောင်ပြုလုပ်နည်း
ကွန်ပြူတာ Memory သန့် ရှင်းအောင်လုပ်နည်း - ပုသိမ်သားလေးဖြိုးဝေ
၁. Desktop ပေါ်မှာ Right-click နိုပ်ပြီး New-Shortcut ကိုထပ်နိုပ်ပါ၊
၂. Type the location of the item လိုရေးထားသည့်နေရာမှာအောက်ကစာကြောင်းတွေကိုထည့်လိုက်ပါ၊
၄.Typeaname for this shortcut:နေရာမှာ Clear Memory ဆိုပြီးရေးထည့်လိုက်ပါ၊
၅. Finish. ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။ပြီးပါပြီ။။
Source : ပုသိမ်သားလေးဖြိုးဝေ
Posted by saw ehlor at 12:000comments
how to remove trojan-dropper vbs agent ? - နေမင်းမောင်
ညကပေါ့ဗျာ ကျနော့်စက်ကို USB stick လေး ထိုးလိုက်တာ Extra HDD ထဲက DATA တွေ အကုန်
trojan dropper ဆိုတာကိုက်ပါရော..သူငယ်ချင်းစက်မှာက Microsoft Essential သုံးတယ် သူ့ကို
မတွေ့ဘူးတဲ့လေ သူက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုရင် သုံးနေတဲ့ Window ကိုဘာမှမဖြစ်ပဲ ကျနော်တို့ Extra
HDD တို့ တခြား တခုခု တပ်ထားရင် အဲ့မှာသွားပြီးတော့ Effect ဖြစ်တယ်ထင်တာပဲ.stick လေးကို
တပ်လိုက်တော့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ kaspersky 2011 က alarm ပေးတယ်.ကျနော် သတိမထားလိုက်ဘူး
လေ.ပြီးလဲ ပြီးရော HDD ထဲမှာ Shortcut လေးတွေ အကုန်ဖြစ်ပြီး folder တွေအကုန်ပျောက်ကုန်တယ်
ဘာမှလဲ လုပ်လို့မရတော့ဘူး (တခုသတ်ိပေးချင်တာက virus ကိုက်တယ်လို့ သံသယရှိနေရင် တခြား
Posted by saw ehlor at 09:500comments
ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကွန်ပျူတာကို အမြဲလိုလို အသုံးပြုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီဝင်းဒိုးမှာ ရှိတဲ့ Tools လေးတွေ နဲ့အစိတ် အပိုင်း လေးတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို သိသင့်သလောက်လဲသိမယ် ပေါ့ဗျာ။ မသိတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အသေးစိတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပါ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ဖိုလ်ဒါလေးတစ်ခုမှာရှိတဲ့ Command bar , navigation buttons , details စတာတွေပေါ့ဗျာ။ ဘယ်နားက အရာလေးက ဘာဆိုတာကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ စာမျက်နှာ အားလုံးပေါင်း ၄၈၈ မျက်နှာရှိပါတယ်။ သူ့အပိုင်းလိုက် သက်ဆိုင်တာလေးတွေကို ရှင်းပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 31.49 ဖြစ်အောင်ချုံ့ပေးထားပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်လေးကို သေသေချာချာဖတ်ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ ဝင်းဒိုးရဲ့ ဘယ်နေရာက ဘာဆိုတာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်သွားပါပြီ။ အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။ ကျွန်တော် ဥပမာ တစ်ပုံပြထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
Posted by saw ehlor at 21:120comments
Portable ဆိုတော့ USB Stick ထဲထည့်ပြီး။အသုံးပြုချင်တဲ့နေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သုံးနေတဲ့သူအများစုကတော့ ဒီကောင်လေးရဲ့ Features လေးတွေကိုသိကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Video ဖိုင်တွေ Music ဖိုင်တွေ နဲ့ Photos လေးတွေကိုပါ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Converter လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 48.3 MB ရှိပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 21:000comments
Posted by saw ehlor at 19:530comments
ဒီမှာသွားလိုက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by saw ehlor at 10:150comments
Posted by saw ehlor at 14:100comments
Posted by saw ehlor at 21:310comments
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
Source : ညီနေမင်း(နည်းပညာ) english - myanmar , myanmar-english dictionary ပါ . နှစ်မျိုးစလုံးသုံးလို့ရပါတယ် . ctrl + shif နှိပ်ပြီးတော့ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျပါတယ် . စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အဆင်ပြေမယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ . ကဲ အောက်မှာ download လုပ်ယူလိုက်ပါ .
Posted by saw ehlor at 13:210comments
(၁) ယောက်ျားအကြောင်းကို နားလည်သလို နားမလည်သလိုနဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီယောက်ျားရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်သွားတယ်။
ယောက်ျားအကြောင်း လုံးဝနားလည်သူဟာ နောက်ဆုံးမှာ အပျိုကြီးဖြစ်သွားတယ်။
(၂) မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တစ်သက်မှာ ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။
တစ်ယောက်က အမှတ်တရထဲမှာ၊ နောက်တစ်ယောက်က တစ်သက်လုံးအနားမှာ
သင့်ရဲ့ငွေကြေး၊ သင့်ရဲ့ရုပ်ရည်၊ သင့်ရဲ့အတတ်ပညာ၊ သင့်ရဲ့ဟာသဉာဏ်
ဘယ်အရာကမှ သင့်ရဲ့သစ္စာစောင့်သိတာလောက် အရေးမကြီးဘူး။
သင့်ရဲ့အလှ၊ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့ဂုဏ်ယူစရာတွေကို ထိုက်တန်တဲ့သူတစ်ယောက်အတွက် ချန်ထားပေးပါ။
(၅) လောကမှာ အလွယ်တကူ ယုံလို့မရတဲ့အရာ သုံးမျိုးရှိတယ်။
ယောက်ျားလေးရဲ့ ဂတိ၊ ယောက်ျားလေးရဲ့အချစ်၊ ယောက်ျားလေးရဲ့ဆင်ခြေဖြစ်တယ်။
လောကမှာ အဖိုးတန်ဆုံးအရာ သုံးမျိုးရှိတယ်။
ယောက်ျားလေးရဲ့ ဂတိ၊ ယောက်ျားလေးရဲ့အချစ်၊ ယောက်ျားလေးရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။
(၆) ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တဖြေးဖြေး စိမ်းစိမ်းသွားတော့တယ်။
(၇) အချစ်မှာ လူကိုအနာကျင်စေဆုံးက "အမှတ်တရ"ဖြစ်တယ်။
တကယ်လို့ အမှတ်တရတွေသာ မရှိခဲ့ရင် ဒီလောက်နာကျင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး။
(၈)လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ဘဝကို သွားမနှောင့်ယှက်နဲ့တော့... ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ရင်လည်း အမုန်းရန်ငြိုးမထားနဲ့..... ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ် ပြုံးပြလိုက်ပါ။
(၉) မိန်းကလေးတွေ နုပျိုချိန်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ချောခဲ့ချောခဲ့၊ ဘယ်လိုပဲ မာနာကြီးခဲ့ကြီးခဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် ဖြစ်သွားတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေ နုပျိုချိန်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ လွတ်လပ်ခဲ့လွတ်လပ်ခဲ့၊ ဘယ်လောက်ပဲ ထကြွခဲ့ထကြွခဲ့ နောက်ဆုံးမှာ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ရုန်းကန်ရတော့တယ်။
(၁ဝ) မိန်းကလေးများ တစ်ခုခု စိတ်ကြိုက်ဖြည့်စွက်ပါ...
Posted by saw ehlor at 12:300comments
အများသုံးအိမ်သာထဲတစ်ခုထဲဝင်ပြီး ကမုတ်ထဲဝင်ထိုင်ကာရှိသေးတယ် ဟိုဘက်အိမ်သာထဲက
" နေကောင်းလား " တဲ့ လှမ်းနှုတ်ဆက်တယ် ။
ဒီနေရာမျိုးမှာ အလာပ သလာပ စကားပြောရတာ စိတ်မသက်သာရှိလှသည် ။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတတ်တော့ . . .
" နေကောင်းပါတယ် "
ဟုသာပြန်ပြောလိုက်သည် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ . . . .
ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ဆက်ရှင်းမယ်ကြံကာရှိသေး . . . . ဟိုဘက်ကထပ်မေးလာပြန်သည် ။
ဘယ်လိုလဲဟ . . ဒီနေရာမျိုးမှာ ဒီလို ဂွတီးဂွကျ မေးခွန်းမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရမလဲ ။
"ခင်ဗျားလိုပဲပေါ့ဗျာ" လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်လက်စသတ်ပြီး ထွက်သွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ထွက်လာပြန်သည် ။
ဘာတွေမေးနေတာလဲဟ ။ စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးအံ့သြစိတ်ညစ်ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလိုက်သင့်ပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
" မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ပေါ့ "
" စားပြီးပြီလားတဲ့ "
စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေး ဘုသွားတယ် ။ ဘယ်လိုလူလဲရိုင်းလှချည်လားဆိုပြီး ပြန်ပြီးရန်တွေ့မယ်လုပ်တော့ . . . . . . . . . .
ဟိုဘက်ကအသံတစ်ခု ထပ်ပြန်ကြားလိုက်တယ် ။
" နောက်မှပဲပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော် ။ သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်မေးနေသမျှ ဟိုဘက်ခန်းက
ဘယ်က ငကြောင်လဲမသိဘူး ရူးကြောင်မူး ကြောင်နဲ့ ငါပြောသမျှလိုက်လိုက်ဖြေနေတာတဲ့လေ "
" ကောင်းရော "
Source : စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ
Posted by saw ehlor at 12:090comments
Genuine Activators For Window Xp, Vista,7(x86/x64) - နေမင်းမောင်
Genuine Activators For Window Xp, Vista, 7
Posted by saw ehlor at 00:160comments
Window7activated မဖြစ်သူများနှင့် Genuine မဖြစ်သူများအတွက် - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
အခုဒီနေ့အထိ ထွက်သမျှ loader ထဲက အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး loader တွေကို ပေါင်းပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. version 2.0.2,5,6,8 လေးမျိုး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. 2.0.8 ကတော့ နောက်ဆုံးထွက်ပါ. အရင်က တင်ပေးတဲ့ window7loader နဲ့ အဆင်မပြေသူများ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ loader နဲ့ စမ်းလိုက်ပါ ရကို ရသွား ပါလိမ့်မယ်. သုံးနည်းကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ. install လုပ်လိုက်ပြီး ခဏစောင့်လိုက် ကွန်ပျူတာကို restart တောင်းရင် restart ပေးလိုက်ပါ. window activated ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်. အထဲမှာ license key ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. window7version အားလုံးအတွက် ပါပါတယ်. loader တွေကတော့ မကြာခဏ အဖျက်ခံရပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး. တင်ထားတာ အဖျက်ခံရလဲ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်. အမြန်ဆုံးသာ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. မရှိမဖြစ် ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်.
Posted by saw ehlor at 00:040comments
Posted by saw ehlor at 11:160comments
ဒါကတော့ microsoft office word 2010 အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ပါ. ဒါကတော့ မေးလ်ကနေ ပို့ပြီးတော့ တောင်းထားတာလေးပါ. အဆင်ပြေ ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အဆင်ပြေတဲ့ link ကနေသာ Download လုပ်လိုက်ကြပါဗျာ.
Mirrorcreator | ifile | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Posted by saw ehlor at 10:120comments
Labels: Mcrosoft Office 2010
Excel 2010 အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
ဒါကတော့ Excel 2010 ကို အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ပါ. ဟိုတစ်ရက်က ညီလေး တစ်ယောက် တောင်းထားတာ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အောက်မှာ Link တွေအများကြီးကနေ တင်ပေးထား ပါတယ်. အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ Download လုပ်ကြပါ.
Posted by saw ehlor at 09:510comments
Source : မောင်စေတနာ Window7သုံးပြီး ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးမရလို့ မေးမေးလာတဲ့ စာဖတ်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ယခု ဖော်ပြပေးတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့် Installer ကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ဒီဖောင့်က Window7မှာ အဆင်ပြေတယ် ပြောပါတယ်။ သုံးကြည့်ပါ။ မိမိအနေနဲ့တော့ မစမ်းထားတဲ့အတွက် မသိပါ။ Window XP ကို အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီတွင် Download လုပ်ယူပါ။
Posted by saw ehlor at 22:290comments
A-PDF Office to PDF 5.5.0 | 26.7 MB Key Features
Posted by saw ehlor at 12:150comments
Posted by saw ehlor at 22:570comments
maungwanna "ကိုမင်းမင်းဇော် ရေ မှတ်ခရု အကြောင်း ဖြေကြားပးတာကျေးဇူးဘဲဗျာ အခုတခါ သန်ကောင်၊တုတ်ကောင် ရှိတဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုဆေးတိုက်ရမယ်ဆိုတာ လုပ်ပါအုံးဗျာ"
maungwanna "ကလေးက ကိုးလ သားပါ"
"လပြည့် "maungwanna: ခင်ဗျာ....ကိုမင်းမင်းဇော် အစားကျွတော်ဖြေပါရစေခင်ဗျ.....သန်ကောင်တုတ်ကောင်ရှိတဲ့ ခလေးအတွက် နာနတ်သီးကို ပျားရည်နဲ့ဆမ်းပြီးစားပေးပါ...." "
အခုလိုမေးတာရော အခုလိုဖြေပေးတာရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
တို့ကို ကြိတ်၍ ရွေးစေ့ခန့် လုံး၍ ကလေးကို တိုက်ပါ။
Source : မြန်မာ့ဆေးမြီးတို
Posted by saw ehlor at 18:200comments
Posted by saw ehlor at 00:110comments
Source : ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်
Posted by saw ehlor at 06:060comments
ယခုဖော်ပြတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးက အင်္ဂလိပ်စာ အသံထွက်များကို ပီပြင်စွာ ရွတ်ဆိုပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခုပါ။ မိမိတို့ သိချင်တဲ့ အသံထွက်များကို ကွက်လက်ထဲတွင် ရိုက်ထည့်၊ သို့မဟုတ် Copy ကူးထည့်ပြီး စကားပြောကို နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ Download လုပ်ယူပါ။
Posted by saw ehlor at 22:420comments
Posted by saw ehlor at 10:420comments
ဓါတ်ပုံ Slide Show လေးတွေကို အလွယ်ကူ လုပ်ချင်သူများအတွက် - နေမင်းမောင်
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကလည်း ဟိုနေ့က လာတောင်းနေတာနဲ့ ဒီနေ့ ဒီကောင်လေးကို တွေ့လို့ သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်ရှယ် ပေးလိုက်ပါတယ် .. ပြီးတော့ Ashampoo ကထုတ်တာ ဆိုတော့ ကျွန်တော် အကြိုက်တွေကတာလည်း ပါပါတယ် .. ဒီကောင်လေးက အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်သလို Key ဖိုင်လေးကို Double Click လေးပေးလိုက်ယုံနဲ့ Registery ထဲမှာ Key ထည့်ပြီးသွား ဖြစ်သွားတာ ဆိုတော့ Crack တို့ Patch ဆို့ကို မသုံးတက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပိုပြီးတော့လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ် .. ပြီးရင် .avi , .mpg , .m2ts , .wmv စတဲ့ File type တွေကို အလွယ်တကူ ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အခွေ Burn ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Burnadisc ကနေပြီး တစ်ခါတည်း တန်းပြီး Burn လို့ရပါတယ် .. သုံးကြည့်ပေါ့ဗျာ .. သုံးနည်းလွယ်လို့ ရေးမပေးတာပါ .. ဘာမှမခက်ပါဘူး .. မြန်မာဖောင့်လည်း သုံးလို့ရပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ ..
Posted by saw ehlor at 21:100comments
ဒီမှာဒေါင်းလုတ် ယူနိုင်ပါတယ်။Android ဖုန်းအတွက်အောက်မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ..
Posted by saw ehlor at 15:510comments
Posted by saw ehlor at 10:430comments
ကွန်ပျူတာမှာအလှလည်းဆင် Alarm လည်းပေးလို့ ရတဲ့ နာရီလေး - မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)
ဒီမှာDownloadယူပါ Desktop Clock Portable
မြန်မာပြည်ကလူများ ဒီကယူ Desktop Clock PTB
Posted by saw ehlor at 10:170comments
Posted by saw ehlor at 19:560comments
Posted by saw ehlor at 19:41 1 comments
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ အများစု ခေါင်းရှုပ်ကြရတဲ့ Error လေးဖြစ်တဲ့ Desktop Gadgets လေးတွေ Error တက်တဲ့ ပြဿနာလေးပါ။ သိပြီးသားသူတွေကတော့ သည်းခံပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်နည်းလမ်း လေးတွေ ကိုပြောပေးထားပါတယ်။ ကဲကျွန်တော်တို့ စပြီး ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Gadgets လေးတွေကို Enable / Disable ပေးတဲ့ နည်းကိုသုံးပြီး ဖြေရှင်းကြည့်ပါမယ်။
အောက်မှာ ကျွန်တော် Enable / Disable အတွက် သတ်သတ်စီ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ ပထမဆုံး ကျွန်တော် တို့ Disable ပေးလိုက်ပါ။ သူရဲ့ Reg ဖိုင်လေးကို RUN ပေးရုံပါပဲ။ ပြီးရင် Enable ဆိုတဲ့ Reg ဖိုင်လေးကို ပြန် RUN ပေးလိုက်ပါ။ ဒါကတော့ ပထမတစ်နည်းပါ။
To Enable Gadgets
To Disable Gadgets
အခုနောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ Restore ပြန်လုပ်တဲ့ နည်းလေးပါပဲ။ ကျွန်တော်အောက်မှာ ပုံလေးတွေ နဲ့ပြပေးထားပါတယ်။ ရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။
အခု Restore လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ မရသေးဘူးဆိုပါတော့ဗျာ။ နောက်ထပ်တစ်နည်းရှိပါသေးတယ်။ အခုက Gadgets ကို Restart ချပေးတဲ့ နည်းပါပဲ။ .Bat ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီကောင်လေးကို Administrator နဲ့ RUN ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့မှမရသေးရင် နောက်ထပ် ကျွန်တော် CMD ထဲမှာရိုက်ထည့် ပြီးဖြေရှင်းပေးရမယ့် နည်းကိုရေးပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော် နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။
အခုနောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ Command Prompt ကို Right-click ပေးပြီး Administrator နဲ့ RUN ပေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအထဲမှာရိုက်ထည့်ရမယ့်စာသားတွေကတော့အောက်မှာပေးထားပါတယ်။
မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ Errors တွေရန်ကနေ ကင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ။
Posted by saw ehlor at 18:310comments
English - Myanmar Dictionary For Andrious OS - နေမင်းမောင်
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ Android OS ဖုန်းတွေအတွက် English to Myanmar, Myanmar to English အဘိဓာန် ဆော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. မေးလ်ထဲကနေ အကိုတစ်ယောက် တောင်းထားတာလည်း ရှိတာနဲ့ တစ်ခြား လိုအပ်တဲ့ သူတွေ ရှိရင်လည်း အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ သုံးနေရာ ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ မိမိတို့ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
Posted by saw ehlor at 15:460comments
Dream Aquarium Screen Saver လေး
Posted by saw ehlor at 10:490comments
Microsoft Office 2010 အား Active လုပ်နည်း - နေမင်းမောင်
Source : နေမင်းမောင် မေးထားတာလေးတွေလဲရှိတာနဲ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေပါအလွယ်တကူအဆင်ပြေစေချင်လို့ပို့ဒ်
လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ Microsoft Office 2010 ကိုတော့ကျွန်တော်သက်သက်တင်မပေးတော့
လို Active လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့အောက်မှာပုံလေးတေါနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်...
အရင်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Microsoft Office 2010 ကို Install လုပ်လိုက်ပါ..။ Install လုပ်ပြီးပြီဆိုတာ
Posted by saw ehlor at 11:32 1 comments
Using System Restore in Windows7and Vista - 11 Dreams
Posted by saw ehlor at 10:560comments
Posted by saw ehlor at 13:570comments